‘लेबर’ शब्दले उब्जाएको भ्रम – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘लेबर’ शब्दले उब्जाएको भ्रम
२०७७ आश्विन २७, मंगलवार ०७:५९ गते
मलाई मेरो आमाबुबाले सानैदेखि भन्दै आएको वाक्य हो– राम्रोसँग पढ्, नत्र लेबर काम गर्नुपर्ला । म सशङ्कित बन्दथेँ । सोच्दथेँ, म लेबर बनेँ भने धेरै दुःख पाउनेछु वा भनौँ म लेबर बन्न हुँदैन, यो त असक्षम मानिसले गर्ने काम हो । अनि फेरि पढाइमा लगाम कस्दथेँ । केही काम गर्नपूर्व सोच्दथेँ, अहो ! म लेबर बने भनेँ ! अनि कामप्रति केन्द्रित रहन्थेँ ।
आजका मितिसम्म आइपुग्दा पंक्तिकारले धेरै मेहनत गरिसकेको छ, चाहे त्यो मानसिक होस् या चाहे शारीरिक, चाहे नैतिक होस् या चाहे सामाजिक । बाटो एउटै बन्यो, कडा मेहनत । पढेलेखेर ज्ञानी–गुणी बन्ने सौखमा कति परिश्रम गरियो यसको कुनै लेखाजोखा छैन, मिसन एउटै थियो– लेबर काम गर्न नपरोस् । सञ्चारमाध्यममा आबद्ध भइरहँदा पनि म सकभर अनुभवलाई प्रत्युत्पादक बनाउने ध्याउन्नमा सकेजति प्रयास केन्द्रित गरियो, काममा अभ्यस्त बनियो पनि ताकि लेबररुपी कुरुप भूतले कहिल्यै नतर्साओस् ।
आमजनजिवनको भाषा र बुझाइमा लेबरको अर्थ हुन्छ, निर्माण कार्यमा संलग्न तल्लो मर्यादाक्रमको व्यक्ति जसले सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, छडसँग सम्बन्धित काम गर्दछ वा भनौँ, गह्रौँ पदार्थ बोक्ने र राख्ने काम गर्दछ ।
पंक्तिकार एकदिन अफिसमा बसिरहँदा एक जना छिमेकी दाइ कार्यालयमा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– के छ भाइ काम ? म हाँस्दै भन्छु– हजुरलाई हुनेचाहिँ छैन । मेरो जवाफ खस्न नपाउँदै उहाँको वाक्य फुट्छ– सटर लाइदेऊ, जाबो एउटा जब दिन सक्दैनौ दाइलाई ? म फेरि धैर्यपूर्वक भन्छु– नभएको त हैन नि दाजु, यहाँले भनेजस्तोमात्रै नभएको त हो नि !
के छ र ?– उहाँले भन्नुभो ।
मार्केटिङ डेलिभरी तर स्यालरी १२ हजारमात्रै हो सुरूवातमा । अर्डरअनुसार गाडीमा सामान लोड गर्नुपर्छ अनि अर्डर हेर्दै पसल–पसलमा झार्नुपर्छ– मैले भनेँ ।
गएर हेर्दिन्छु– उहाँले भन्नुभो ।
गर्नुपर्छ– म फेरि भन्छु ।
भनेपछि लेबर ?– उहाँले जब बोल्नुभो, मेरो मथिङ्गल हल्लियो । उफ् ! फेरि लेबर ?
मैले फेरि सोधेँ– ह्वाट डु यू मिन बाई लेबर ?’
उहाँले उहीरुपमा जवाफ फर्काउनुभो– कार्टुन–साटुन बोक्ने, उसैले (साहूले) भनेको ठाउँमा राख्ने, निकाल्ने, शिर निहुराएर ज्यू, हजुर गर्दै आज्ञा शिरोपर गर्ने ।
म निःशब्द भएँ र उहाँकै जित सोचेँ, किनकि बहुसंख्यकको धारणा नै पारदर्शी र निर्णायक हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश युवाशक्ति विदेश पलायन भएको छन् । विदेश जान नसक्ने केही युवा यतै लेबर काममा आबद्ध छन्, अनि विदेशै जाने पनि परोक्षरुपमा लेबर काम गरिरहेका छन् । म सोच्दछु कि किन जनमानस लेबर शब्दलाई जीवनमा सकभर टाढै राख्न खोज्दछ ? कतै आममानसिकतामै त दृष्टिदोष छैन ?
पंक्तिकारको नजर नै सर्वोत्कृष्ट त होइन, तर तथ्य र सिद्धान्तको आधारमा केही कुरा दाबाचाहिँ गर्न सक्छ । लेबर शब्द आगन्तुक शब्द हो, जसको ठेट नेपाली अनुवाद मेहनत भन्ने हुन्छ । त्यसैले पनि होला, कडा श्रम गर्नुलाई लेबरको पगरी गुथाइदिन्छौँ हामी । म दिग्भ्रमित हुन्छु कि हामीले यो शब्दलाई कति सङ्कीर्ण भावले हेरेका छौँ या उदार ! यदि हामी सङ्कीर्ण हुन्थ्यौँ भने पटकपटक लेबर किन हुन्छौँ ? अथवा भनौँ उदार हुन्थ्यौँ भने हरेक कुरामा लेबर हुनुपर्ने त्रासमा किन सशङ्कित हुन्छौँ ? कोहीकसैले पढाइलेखाइ गर्न नसकेमा, व्यापार व्यवसाय गर्न असक्षम भएमा, आर्थिक स्थिति न्यून भएमा अथवा अरु केही काम नपाएमा गरिने कामको रुपमा कथित लेबर कामलाई लिइन्छ । आमभावलाई नै सर्वाेपरि मान्ने हो भने पनि निर्माणमा लेबर नै सबैभन्दा मह¤वपूर्ण अंश हो । बहुसंख्यक लेबरले जोखिमयुक्त काम पनि सहजरुपमा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दछ । कामको ठूलो हिस्सा ओगट्दछ, अनि तयार गर्दछ सुन्दर संरचना ।
म सोच्दछु, के साँच्ची लेबरले भारी बोक्ने, घन ठोक्ने, मसला घोल्ने वा तल्लो दर्जाको काममात्रै गर्छ ? के तल्लो दर्जाको काम गर्नेमात्रै लेबर हुन्छ ? ती पनि लेबर हुन सक्लान्, तर तल्लो दर्जाको काम गर्नेमात्रै लेबर हुनै सक्दैन । काम गर्ने तथा गराउने, जागिर गर्ने तथा आफ्नै व्यवसाय गर्ने सबै एकभन्दा एक लेबर हुन् । नेपाली अनुवादित शब्द सापट लिएरै भन्ने हो भने हामी सबै एक किसिमका लेबर नै हौँ । स्कुल पढ्दा किताबका लेबर, वर्तमानमा भविष्यलाई कल्पेर लेबर, आआफ्नो काममा खरो उत्रन लेबर, अरुबाट स्याबासी पाउन लेबर, हरेक कार्यमा पारङ्गत बन्न लेबर । आजको लेबरले भोलिको भविष्य उज्यालो हुन्छ भने कसले गर्दैन र ? फरक यत्ति हो कि आज धेरै गर्नेले भोलि कम र आज कम गर्नेले भोलि ज्यादा गर्छ ।
एक अन्तराष्ट्रिय लेखक रोबर्ट टी कियोसाकी’ले आफ्नो विश्वचर्चित पुस्तक धनी बुबा ः गरिब बुबामा पनि उल्लेख गरेका छन् कि सफल बन्नुछ भने कामको प्रकृति नहेर्नुस्, केवल काममा लगाव दिनुस् र कडा मेहनत गर्नुस् । यदि कामको दर्जा छुट्टयाउँदै जाने हो भने जीवन यसैमा बित्न सक्छ, त्यसैले काम ठूलो र सानो हुन्न । अर्थात्, हामीले लेबर गरेपछिमात्रै सफलताको रसास्वादन गर्न सक्दछौँ । निर्माणमा जुटेका कयौँ कामदारलाई हेर्दै कयौँपटक बुझेर÷नबुझेर, जानेर÷नजानेर हामी लेबर बन्यौँ, तर पनि यो बुझिरहेका छैनौँ कि हामी के बनिरहेका छौँ ! संसारमा सायदै यस्ता मानिस होलान् जो लेबर गरेकै छैनन्, चाहे त्यो शारीरिक होस् या चाहे मानसिक !
अनि फेरि यो सबै लघुताभास केका लागि ? शब्दलाई किन संकुचित पार्दै वर्गीय विभेदको विष वमन गरिरहेका छौँ ? मानसिकरुपमा मात्रै होइन, यदि तपाईंले शारीरिकरुपमा लेबर गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं पनि असक्षम हो । हरेकमा फरक–फरक गुण हुन्छ र बझ्ने तरिका पनि फरक हुन सक्छ । त्यसैले, कामअनुसार लेबरका नाउँमा कसैलाई अपमान नगरौँ । आउनुहोस्, आजैबाट यहाँले यहाँको ठाउँबाट मलाई स्वीकार्नुस् अनि म यहाँलाई स्वीकार्छु, तब हेरौँ कस्तो बन्नेछ हाम्रो समाज !